Initiative Q Review – The lacagta digital weyn ee soo socota? | Show Top
Waa maxay Initiative Q?
Initiative Q waa mashruuc lagu doonayo in la abuuro hab adduunka ugu fiican bixinta.
Farqiga u dhexeeya this iyo cryptocurrency Mashaariicda waa in Initiative Q leeyahay istaraatijiyad ee lagu beegsanayo adopters hore. Waxa uu bilaabay in ee xilli by bilaabay casuumaad model kaliya, waxaana uu bilowday iska siiyo xaddi weyn oo crypto in adopters hore.
max A ee 2 trillion lacagta birta ah la soo saari doonaa, oo ujeedadu tahay hal tusa noqon doonaa qiimihiisu $1. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee la cryptocurrencies badan waxa la'aanta carruur ama dadka isticmaala. Initiative Q Ujeeddada 1aad waa in la abuuro mass muhiim u ah dadka isticmaala ka dibna la dhiso hab adduunka ugu fiican bixinta.
Initiative Q laga yaabaa isticmaali technology cryptocurrency laakiin tani waa weli la go'aansaday.
Isticmaalka farsamooyinka ugu dambeeya, ujeedadu waa in la abuuro hab ugu fiican bixinta, fiiga hooseeyo, bixinta si degdeg ah, fududahay in la isticmaalo iyo khiyaamo free. Isticmaalka app ah baarista shay oo la soco, tani waa ay fikrad of fududaato in la isticmaalo. Khayaanada waxaa loogu hortegi karaa by faa'iidaysiga dareemayaal faraha, GPS, kaamirooyinka iyo mikroofanada. Initiative Q ayaa sidoo kale doonaya in ay awood u leeyihiin in ay dib u celin xawaalad, taas oo Bitcoin ma waxay leeyihiin. Initiative Q sidoo kale gaari doonaa dadka aan awoodin inaad furatid xisaab bangi.
Ma loo jecel yahay?
Haddii aad tahay qof firfircoon on warbaahinta bulshada ka dibna aad laga yaabo in ay hore u soo gaarto Initiative Q. Just hubi socda garaaf Isbeddellada Google. Ereyga 'Initiative Q’ ayaa haleel erayga 'Ethereum’ on Isbeddellada Google.
Initiative Q Review – Mashruuca ayaa ku xigta ee weyn
Sidoo kale, Initiative Q hadda ku dhawaaqday inay ka badan leedahay 2 million ups calaamad. Aan xun loogu talagalay shirkad ahaa firfircoon on warbaahinta bulshada ka May 2018.
Si kor u saxiixo si Initiative Q aad leedahay si ay leeyihiin martiqaad ka qof. Waxay kuu soo diri link via email ama warbaahinta bulshada ka dibna aad ka link in kor u saxiixo. Marka is diiwaangelinta waxaad ka heli Q4,945 of crypto.
Ma nidaamka Ahraamta ah?
Iyada oo nidaamka Ahraamta ah, adopter hore maalgashiga xoogaa lacag ah ama crypto, ka dibna uu ku Abaal marin lagu tilmaamayo kuwa kale. The adopters hore si xoogan uga soo nidaamka hesho abaalgud iyo faa'iidada ugu badan, iyo lacag ka maal-cusub ayaa loo qaybiyey ee adopters hore. Dadka hoose ee Ahraamta u badan tahay in la sameeyo khasaare ay maal gaar ahaan haddii mashruuca burburo. Iyada oo Initiative Q jira maalgelin hore ma, kaliya aad saxiixdo. Waa lacag la'aan ah iyo waxa jira maalgelin ma at dhan codsaday. Iyada oo Initiative Q, qof kasta wax bay tartaa sida ma jiraan wax maalgelin hore ku lug lahaa.
ay goori goor tahay inay la soo wareegto ilaa?
Ma aha goor danbe in saxiixdo, sida aad ka arki kartaa garaaf Isbeddellada Google. Tani waxa ay kaliya bilaabay in ay u guuraan ilaa, iyo Google Isbeddellada ayaa sidoo kale saadaaliyay in ay dadka sii wadi doonaan si ay u tagaan ilaa bilaha soo socda. Waxaa kaliya ee marxaladaha hore iyo waxa uu leeyahay hab dheer si ay u tagaan. Sidoo kale tani ma aha ICO ah halkaas oo aad leedahay si ay u sameeyaan maalgashi, waa lacag la'aan in ay saxiixdo, sidaas daraaddeed waxba ma jiraan in ay lumiyaan.
Initiative Q noqon doonaa wax ku xigta ee weyn?
Waa ay adag tahay in la sheego sida Initiative ee Q ayaa kaliya ku bilowday waxa la wareega hore ee uruurinayaan xaddi weyn oo isticmaala. Waa marka aan arko marxaladaha dambe, marka nidaamka lacag bixinta waa hirgeliyaan, in aanu xukumi karaa haddii mashruucan ay noqon doontaa guul. Waxay leedahay koox xiriir la Paypal si aanu mashruucu u muuqdaan kuwo xoog
Waxaan haystaa marti xadidan oo kaliya, Sidaa darteed waxa ay 1-dii waxaa ku soo 1aad adeegi saleysan.
martiqaad Link: https://initiativeq.com/invite/SHLWWUw3X
link ayaa si toos ah gab doonaa ka dib markii kootada ugu yeedhi la gaaro.
Tags: Airdrop Airdrops Bitcoin block Chain Block Technology Chain Cryptocurrency
← Sida loo dhigay ilaa iptables si toos ah u soo celin on reboot in CentOS Linux? Sida loo reserved Daafaca Windows ka Brannmur lagu wadaago drives in Docker? →
Mid ka mid ah maleeyay in on "Initiative Q Review – The lacagta digital weyn ee soo socota?”
Halkan waa yeedhi link: https://initiativeq.com/invite/rWLhhh7pm